मेघावती पटेलको माया | मझेरी डट कम
छि मेरी स्वास्नीले त गाजल लगाएको पनि कति नसुहाएको? लौन खान जानेकी भए पो हुञ्छ ? अनुहार मिलेको भएपो हुञ्छ? न मेघावतीले जस्तो कम्मर मर्कौन जानेकी छ नत मस्किन नै। उसलाई फेरि स्वास्नीसँग रिस उठ्यो । उसलाई स्वास्नीका सबै कुराले बिरक्त्यायो ।
"मेघावती बोल्दा त काचै निलु जस्तो हुञ्छ । रातदिन सुपारी र पान खाए पनि दात कति मिलेका ।" उसले मनमनै कुरा गुथ्यो ।
ऊ दायाँ बायाँ केही नहेरी फतफत हिडिरहेको छ ।
"ए, नवीन कतातिर हो ? भट्टीमा तातिने हैन"? आफ्नै अफिसमा काम गर्ने खरिदारले लामा लामा हात पसार्दै झस्कायो ।
"भोलितिर भेटेर तातिने हो, बिरामी हेर्न जादै छु," ऊ यति भनेर फुत्कियो ।
"हैन त्यो मेघावती र सुपारेको सम्बन्ध कसरी छुटाउने हो ? फेरि सानैमा बिहे गरेकी स्वास्नी छे । तीन ओटा बच्चा पाई । त्यसलाई पारपाचुके पनि दिन नमिल्ने खर्चले पनि नभ्याउने। कस्तो खप्पर मेरो ।"
नवीनले आफ्नो मुखियाको जागिर सम्झ्यो । महिनाभरि काम गर्दा पनि राम्रोसँग मिठो मसिनो खान नपुगेको सत्यताले ऊ रन्थनिएको छ । फेरि अनुहार नपरेकी स्वास्नीले यसो बच्चा रोकथाम गरेर एउटा मात्र पाएकी भए पनि हुन्थ्यो नि । सबै जिम्मा मलाई छोडेकी छ । कस्ती पखिनीलाई बिहे गरेछु । स्वास्नी त मेघावती जस्तो पो हुनु पर्छ । तर मेघावतीलाई जारी हाल्छु । उसका मनमा कुरा रन्थनिए । ओहो मेघावती नभेटेको भए त यो जीवनको वैंश त्यसै जान्थ्यो । धन्न मन पराएकी छ । आफू पनि कहाको राम्रो हुनु र ? उसलाई रुन मन लाग्यो ।
"के हो नविनजी ? कतातिर हान्निएका ? जुत्ता पनि उल्टो लगाएका छौ ? कमिज पनि मिलेको छैन । हैन तिम्रो दिमाग त ठिक छ ? बिचरा सत्र वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि न त पैसा कमाएका छौ, न त तिम्रो अर्को पद पाएका छौ । त्यसैले बिरक्तिएर पशुपति हान्निएका हौ कि के हो? अहिलेसम्म राजनीति गरेको भए कम्तीमा वडा सदस्य हुने थियौ ।"
आफ्नै गाउँको साथीले उसलाई असनभन्दा अलिक वर यसो भनेर झस्काइदियो ।
ओहो साथी नभेटेको भए त बित्यास पर्थ्यो । मेघावतीले के भन्थी होला ? एस्तो नाथे लुगा पनि लाउन नजान्नेलाई के माया गर्ने भन्थी होला ? मेघावतीको अंगालोमा कसिएर संसार बिर्सनु छ। यो नाथे जागिर स्वास्नीका चौरिएका गाला र बजारमा रन्किएको महंगी बिर्सनु छ । स्वास्नीले खोजी नीति नगर्ने भए र त्यो थोते सुपारे पनि नहुने हो भने आजको रातत मेघावतीसँगै काट्न हुन्थ्यो । आफ्नो पुर्पुरो नै अफागी । उसले मनमनै मेघवतीसँगको सम्भावित भेटलाई लिएर लेखा जोखा गर्यो ।
"हैन साथी नेपालको गनाएको राजनित पनि के गर्नु ? मलाई बेलुका भएपछि भट्टी र तरुनी हाँक्ने यहाँका बुद्धि नभएका नेता हुनु छैन । जे भए पनि स्वाभिमान छ," उसले आफ्नो सफाइ दियो ।
"तिमीले पैसा कमाउन नसके पनि जाउलाको भरमा बाँचौला ? सिस्नो खाएर पनि यी लालाबालालाई राम्रो पढाउनु पर्छ ।" सधैं स्वास्नीले महिनाको आखिरीमा पैसा सकिएपछि यस्ता कुरा गरेको सम्झियो ।
"कहिले लाउन खान जानेकी भए पो हुन्छ ? धन्न फिक्का भए पनि चिया बनाएर दिएकी छ । स्वास्नी अलच्छिनी भएपछि प्रगति लोग्नेको हुदैन भन्थे हो रहेछ ।"
उसलाई स्वास्नीसँग फेरि रिस उठयो । साथीसँग बिदा भई फेरि मेघावतीतिर पाइला सार्यो । अहो, आज त मेघावतीलाई अतर किनिदिन्छु । उसको मन बिचित्रिएको छ । सात महिनासम्म मलाई माया गरेकी छ । अत्तर त केही हैन पैसा भए एउटा घर किनी दिन्थे, सानै भए पनि फिरफिरे मोटर किनिदिन्थे । सुपारेबाट हटाएर आफ्नी बनाउँथें । त्यो गन्हाउने छिंडीमा मेघावतीलाई कहाँ बस्न दिन्थे र? उसको मन मेघबती को मायाले रन्थनिएको छ ।
वीस वर्षसम्म कुनै गुनासो नगरेकी स्वास्नी बिर्सियो । दुई सय रुपैयाँ हालेर अत्तर किन्यो । एक महिनाको लागि चिनी किन्ने पैसा अत्तरमा खनायो । मेघावती खुसी हुनु नै ऊ खुसी हुनु हो ।
आज अरु दिनभन्दा आफ्नो घरदेखि मेघावतीको डेरा पुग्न बाटो लामो लागेको छ उसलाई । "हैन मान्छे पनि कति बढेका ? सडकै ढाकेर हिड्ने? फेरि समएमा डेरा नपुगेमा मेघावतीको पोइ सुपारे आइपुग्छ । सुपारेले थाहा पाए पनि पाओस । मेघावतीलाई आफ्नी बनाउँछु र स्वास्नी छोरा छोरी पनि छोडी दिन्छु ।"
यतिखेर नवीन अलिक तातिएको छ । उसलाई मेघावतीको कल्कलाउँदो उमेरले मत्त्याएको छ ।
घरमा मिठो मसिनो पाकेको बेला आफ्नो लागि नराखी लोग्नेलाई खान दिने, रात दिन छोरा छोरी समाल्ने स्वास्नीको चाउरिएको गालालाई ऊ मेघावतीको पोटिलो गाला मुसार्दै बिर्सन चाहन्छ ।
"सारा दुनियाले जे भनून, म मेघावतीलाई बिहे गरेरै छोड्छु ।"
उसले मेघावतीको डेराभित्र नपस्दै यी कुरा गर्यो र लामो स्वास फेर्यो । सरासर मेघावतीको कोठाको छेउमै पुग्ने लाग्दा कपाल मिलायो । कमिज ठिक पर्यो । पैन्ट पनि कस्यो । अतरलाई हातमा देखिने गरेर लियो र ढोका हान्यो । ढोका सुपारेले खोली दियो । सूपारेको गन्हाएको अनुहारलाई हानेर अगाडि जान मन लाग्यो ।
"के छ दाइ ? आउनु न," सुपारे बोल्यो ।
उसले मेघावती देखेन। उसले दुई मिनेट पनि रोक्न सकेन र बोल्यो, "मेघावती बहिनी कता जानु भएछ ?"
मेघावती पान पसलेसँग भागिछ ? धुम पाताल खोजे हिजोदेखि खबर छैन । प्रहरीमा पनि भर्खरै खबर गरेर आएको । यति बोल्दा बोल्दै सुपारे भक्कानियो। नवीनले आफ्नो हातमा बोकेको अत्तर छाम्यो । मुटु दुखेको जस्तो भयो र सूपारेको अगाडि उभियो नविनकुमार ।
महाशय दर्जाको कुरा गर्दा
मेरो गाउँको खबर
बाँदरहरू खेती गर्दैनन्
‘हामी आमाबाबु’ले सिक्नै पर्ने पाठ
नभेटिए जाती भन्दाभन्दै
जिन्दगीको यात्रा मेरो..........
सुन्दर मुहार वाली
झर्यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी
श्रद्धान्जली स्वर्गीय गोपाल भुटानीज्यूमा
राजविराजमा मैथिली भाषासम्बन्धी कार्यक्रम
मैले के गरूँ र !
संबिधानबाट पछाडि फर्किने ठाउँ छैन अब